Frequently Asked Questions | Office of the Auditor General of the Union
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းကို ဘယ်မှာ တက်ရောက်နိုင်ပါသလဲ?
- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းကို အမှတ် ၁/၁၉၊ သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်း၊ အလုံမြို့နယ်တွင် တက်ေရာက်နိုင် ပါတယ်။
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် ဘယ်လိုအရည်အချင်းများ လိုအပ် ပါသလဲ?
- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်းမှာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(B.com ) (သို့မဟုတ်) စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့(B.Act) စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ (နောက် ဆက်တွဲစာမေးပွဲများဖြင့် အောင်မြင်သူများမပါ) နှင့်
- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းစာမေးပွဲကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ထားပြီး လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ စာရင်း တွင် ပါဝင်သူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် ဘယ်လိုအထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသလဲ?
- စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(B.com) (သို့မဟုတ်) စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့(B.Act) ရရှိထားသူဖြစ်ပါက ဘွဲ့လက်မှတ်(မူရင်း+မိတ္တူ)၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (မူရင်း+ မိတ္တူ) များတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊
- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်းစာမေးပွဲကို ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ထားပြီး လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ စာရင်း တွင် ပါဝင်သူဖြစ်ပါက ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) အောင်လက်မှတ်/ထောက်ခံစာ (မူရင်း+မိတ္တူ) များတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး
- နိုင်ငํသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မူရင်း+မိတ္တူ)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ဝန်ထမ်းဖြစ် ပါက ရုံးအကြီးအကဲ၏ ဝန်ထမ်းဖြစ်ေကြာင်း ထောက်ခံချက်၊ ပတ်စပို့အရွယ် ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံ နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရပါမယ်။
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း ရဲ့သင်တန်းချိန်များ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားပါသလဲ?
- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းကို ြပန်တမ်းဝင် ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ တနင်္လာ နေ့မှ သောကြာနေ့အထိ နေ့စဉ်နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၈း၅၀ထိ၊ စနေနေ့တွင် နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၁၁း၅၀ နာရီထိ တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် သင်တန်းကို ပထမပိုင်းနှင့် ဒုတိယပိုင်း ဟူ၍ (၂)ပိုင်း တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ြပီး တစ်ပိုင်းစီ၏ သင်တန်းကာလမှာ တစ်နှစ်ြဖစ်ပါတယ်။
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်းတွင် ဘယ်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာလဲ?
- Advanced Accounting- I
- Cost and Management Accounting- I
- Business Mathematics & Statistics
- Auditing- I
- Service Regulation & Financial Regulation ဘာသာရပ်များကို သင်ကြား
စီးပွားရေးဥပဒေ (Commercial law) ၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း (Service Regulation & Financial Regulation) ဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ် ၄-ခုကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- Advanced Accounting- II
- Cost and Management Accounting –II
- Financial Knowledge and Current Economic Affairs ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Taxation ဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ် ၅-ခုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ အောင်မှတ်များက ဘယ်လောက်လဲ ?
ဖြေဆိုရသည့် ဘာသာရပ်အားလုံး၏ အောင်မှတ်မှာ ၅၀ မှတ်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ် ၆ ခုလုံး အနည်းဆုံး ၅၀ မှတ်စီရမှာသာလျှင် စာမေးပွဲကို အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း အတွက်ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေနှင့် လိုအပ် သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ဖော်ပြပေးပါ၊
- သင်တန်းေကြး ၂၅,၀၀၀ကျပ်၊ မှတ်ပုံတင်ေကြး ၃,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၂၈,၁၀၀ကျပ်၊ ပေးသွင်း၍ နိုင်ငํသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ၊ ပတ်စပို့ အရွယ် ဓါတ်ပုံ (၃) ပုံတို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားရပါမယ်။
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း ပြီးဆုံးပါက ဘာအောင်လက်မှတ် ရရှိမှာလဲ?
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင် (ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း ြပီးဆုံးပါက လက်မှတ်ရပြည်သူ့ စာရင်းကိုင်စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် (Certified Public Accountant Examination Passed Certificate) ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းကို ဘယ်မှာ တက်ရောက်နိုင်ပါသလဲ?
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်းကိုရုံးအမှတ်(၁၂)၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ နေပြည်တော်သင်တန်းကျောင်းနှင့် အမှတ် ၁/၁၉၊ သခင်မြပန်းခြံလမ်း၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်း စစ်ချုပ်ရုံး၊ ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်း၊ အလုံမြို့နယ်တို့တွင် တက်ေရာက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်ရောက်ရန် ဘယ်လိုအရည်အချင်းများ လိုအပ်ပါသလဲ?
- နေပြည်တော်သင်တန်းကျောင်း၌ နေပြည်တော်ရှိ အစိုးရဌာနများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေကြသော တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားသည့် ဝန်ထမ်းများသည် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန်မလိုအပ်ဘဲ တက်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
- ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းတွင် တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုရရှိထားသည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ််။ ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအား သင်တန်းသားအဖြစ် ရွေးချယ်ပါတယ််။
ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းတွင် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆို ရန် ဘယ်လိုအထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသလဲ?
- ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်းတွင် ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုရန်အတွက် ဘွဲ့လက်မှတ် (မူရင်း+ မိတ္တူ)၊ နိုင်ငํသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+ မိတ္တူ)၊ ပတ်စပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ (၃) ပုံ၊ စာမေးပွဲေကြး ၃,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၃,၁၀၀ကျပ် ပေးသွင်း၍ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားရပါမယ်။
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း ရဲ့သင်တန်းချိန်များ ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားပါသလဲ?
- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း)သင်တန်းကို ပြန်တမ်းဝင်ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့အထိ နေ့စဉ်နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၈း၅၀ထိ တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ဒုတိယပိုင်း)သင်တန်းကို ပြန်တမ်းဝင်ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိ နေ့စဉ်နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၈း၅၀ထိ၊ စနေနေ့တွင် နံနက် ရး၀၀ နာရီမှ ၁၀း၅၀ နာရီထိ တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- သင်တန်းကာလမှာ ပထမပိုင်း ၁ နှစ် နှင့် ဒုတိယပိုင်း ၁ နှစ် ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် သင်တန်းတွင် ဘယ်ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာလဲ?
- ဘောဂဗေဒ (Economics)
- စီးပွားရေးဥပဒေ(Commercial Law)
- ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အထွေထွေဗဟုသုတ(General Commercial knowledge)
- စာရင်းရေးစာရင်းကိုင်(Book Keeping & Accountancy)
- စီးပွားရေးသင်္ချာနှင့် စာရင်းအင်း (Business Mathematics & Statistics) ဘာသာရပ် များကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးဥပဒေ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန် ဘာသာရပ် ၃-ခုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
- ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံခြင်း (Financial Reporting)
- တန်ဖိုးတွက်စာရင်းကိုင်ပညာ (Cost Accounting)
- ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း (Service Regulation & Financial Regulation)
- စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း (Auditing)
- သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှင့် စနစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မူပညာ (Information & Communication Technology and system Development) ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း ဘာသာရပ်မှလွဲ၍ ကျန်ဘာသာရပ် ၅-ခုကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ကြားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုရသည့် ဘာသာရပ်အားလုံး၏ အောင်မှတ်မှာ ၄၀ မှတ် ဖြစ်တယ်။
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း အတွက်ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ဖော်ပြပေးပါ။
- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင် (ပထမပိုင်း/ ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း ေကျာင်းအပ်နှံရန်အတွက် သင်တန်းေကြး ၂ဝ,၀၀၀ကျပ်၊ မှတ်ပုံတင်ေကြး ၂,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၂၂,၁၀၀ကျပ် ပေးသွင်း၍ နိုင်ငํသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+ မိတ္တူ)၊ ပတ်စပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံတို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားရပါမယ်။
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း စာမေးပွဲ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန် ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များရှိပါသလဲ ?
- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း ပထမ ၅ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီးတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ တွက်မှာဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား ကျောင်းမှန်မှန်တက်ရန် သတိပေးစာ ထုတ်ပြန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
- သင်တန်းကာလ ၉ လပြီးဆုံးချိန်၌ ဘာသာရပ်အသီးသီးတွင် သင်တန်းတက်ရောက်ချိန် ၆၀% ပြည့်မီခြင်းရှိမရှိ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံတွက်မှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယအကြိမ် (နောက်ဆုံး အကြိမ်) ၆၀% မပြည့်မီသည့် သင်တန်းသားများအား စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ပြု မည်မဟုတ်ပါ။
- ယခင်နှစ်များက စာမေးပွဲကျရှုံးသူများ ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်သင်တန်း စာမေးပွဲအတွက်ပေးသွင်းရမည့် အခကြေးငွေနှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ဖော်ပြပေးပါ။
- ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်(ပထမပိုင်း/ဒုတိယပိုင်း) သင်တန်း စာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲေကြး ၃,၀၀၀ကျပ်၊ လျှောက်လွှာေကြး ၁၀၀ ကျပ်၊ စုစုပေါင်း ၃,၁၀၀ ကျပ် ပေးသွင်း၍ နိုင်ငํသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+ မိတ္တူ)၊ ပတ်စပို့အရွယ် ဓာတ်ပုံ(၃) ပုံတို့နှင့်အတူ ကိုယ်တိုင် လာရောက် လျှောက်ထားရပါမယ်။
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်ဒုတိယပိုင်းသင်တန်း ပြီးဆုံးပါက ဘာအောင်လက်မှတ် ရရှိမှာလဲ?
ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်ဒုတိယပိုင်းသင်တန်း အောင်မြင်ြပီးဆုံးပါက ဒီပလိုမာစာရင်းကိုင်အောင် လက်မှတ် (Diploma in Accountancy) ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
DA သင်တန်းသည် ဘယ်နှစ်နှစ်တက်ရပါသလဲ
DA Part I သည် တစ်နှစ် ၊ DA Part II သည် တစ်နှစ် စုစုပေါင်း (၂)နှစ် တက်ရပါသည်၊၊
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း (ပထမပိုင်း)အမှတ်စဉ်(၄၁)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းရန်
လက်မှတ်ရပြည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း(ပထမပိုင်း) အမှတ်စဉ်(၄၁)နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကောင်စီ၊ ရန်ကုန်သင်တန်းကျောင်း ရုံးအဖွဲ့ ၀၁- ၂၂၃၁၄၃ ၊ ၀၁-၂၁၄၀၂၀၊ ၀၁- ၂၂၇၂၄၆ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
CPA သင်တန်းများကို တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မြို့တော် အတော်များများ၌ ဖွင့်လှစ်နိုင်မည့် အခြေအနေ
CPA သင်တန်းများကို လတ်တလော နေပြည်တော်တွင် တိုးချဲ့ခြင်းအတွက်ပင် Resource စုစည်းနိုင်ရေး စိစစ်နေရသည်ဖြစ်နေရာ လောလောဆယ်၌ ထပ်မံ တိုးခဲ့ျရန် အခက်အခဲရှိပါသည် မြန်မာနိုင်ငံ စာရင်းကောင်စီ ဥပဒေအသစ် ထွက်သည့်အခါ ပုဂ္ဂလိက ကိုယ်ပိုင်စာရင်းပညာ သင်ကျောင်းများ မကြာမီ ပေါ်ပေါက် လာပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မြို့တော် အတော်များများ၌ CPA ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ ပေါ်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းရကြောင်း၊